I-Issuu: Ithuluzi Lokumaketha, Hhayi Amaphephabhuku Nje | Martech Zone
ULwesithathu, April 25, 2012 ULwesine, April 26, 2012 UJanneane Blevins
U-Issuu kuvame ukuhlotshaniswa ne- umkhakha omagazini wokukhosela okhona online, ikhula ngamandla omagazini bemfashini, namanye amaqembu ezinzalo ze-niche. Kepha i-Issuu, enezincwadi zayo ezakheka kalula ze-PDF, ingaba ithuluzi eliyigugu lokumaketha nokuthuthukiswa kwebhizinisi. Ngo- KA + A, njengoba siqhubeka nokwandisa amakhasimende ethu, u-Issuu usephenduke umzila wokwabelana ngomsebenzi wethu nabantu ezweni lonke.
Kwaqala ngencwadi yesikhwama esasiyiklanyile sayiphrinta ngamaqoqo amancane sisebenzisa Ama-Blurb (elinye ithuluzi elihle). Sikuthandile okuhlangenwe nakho okucwilisiwe kwencwadi - isisindo sayo ezandleni zakho, amakhasi we-matte abushelelezi, nokuphequlula ngesikhathi sakho sokuphumula. Ngenkathi siqala ukuphrinta, sabelana futhi siFedEx'ing lezi zincwadi ezweni lonke, sabona ukuthi sidinga enye indlela yokwaba okuqukethwe kwethu. Isu lokuphrinta elihlanzekile likhawulelwe, kungakhathalekile ngezindleko, ukukhululeka kokuvuselelwa, noma isikhathi sokulethwa. Besifuna indlela yokuletha ulwazi lwencwadi, ngokufunwayo.
Isixazululo sethu sisitholile ku-Issuu, inkundla yokushicilela edijithali eye yasenza sabelana ngomsebenzi wethu nezithameli ezibanzi futhi saqhubeka nokuletha ulwazi olukhulu. U-Issuu ugcina ezinye zezici ezithandeka kakhulu encwadini ebonakalayo (ecwilisayo futhi ephathekayo) futhi ayigcwalise ngamandla weplatifomu eku-inthanethi (esheshayo ukwabelana, okulula ukuyibuyekeza nezindleko eziphansi). Izivakashi zingenza isithupha ngenguqulo egcwele yesikrini se- incwadi yethu online (bheka ngezansi!), bese wabelana ngamakhasi (noma konke okushicilelwe) nabangani babo kanye nozakwabo. Ngenkathi sivuma, kunzima ukufaka esikhundleni sekhophi yencwadi ebusuku bonke, ezimweni eziningi, i-Issuu ifinyelela kahle kakhulu futhi ibanzi - futhi yilokho okusigcina sisebenzisa ithuluzi.
Vula ukushicilelwa - Mahhala ukushicilela - Umkhiqizo ongaphezulu
Tags: ukuthuthukiswa kwama-BusinessesUkukhangisa OkuqukethwedigitalukukhishwamarketingPublishing
UJanneane uyiProjekthi noMphathi Womphakathi nethimba elimangalisayo e KA + A, lapho baklama khona imikhiqizo kanye nokuhlangenwe nakho kwezinkampani zobuchwepheshe obukhula kakhulu. Ungumsunguli we- IndySpectator, umhlahlandlela we-e-newsletter wezindlela ezintsha zokuthanda u-Indy, kanye nebhulogi likadadewabo, Isibukeli sokuqalisa, ezinikezelwe kusimo sokuqalisa sendawo. Muva nje uJanneane ubesebenza ukukhulisa umphakathi wasendaweni wase-Indy ngokusebenzisa Iphethini, umhlangano wamahhala wanyanga zonke wabantu abanentshisekelo kwezemfashini.
Ngo-Apr 26, i-2012 ku-12: 00 AM
Bengikhuluma nje neklayenti namuhla futhi ngabelane ngalokhu okuthunyelwe, uJanneane. Baphrinta amathani ezincwajana ezisezingeni eliphakeme kakhulu kulayini wabo womkhiqizo. Lokhu kungaba yindlela ekahle yokwabelana ngalezo zincwajana ngamadijithali nezethameli zabo. Ngiyabonga ngalokhu okuthunyelwe - ubuchwepheshe obuhle impela futhi ngiyayithanda incwajana KA + A… Ngibheke phambili osukwini engingasebenza ngalo nethimba lakho ukwenza kahle imikhiqizo yethu!